कुष्ठरोग कागजमा मात्र निवारण भयो, व्यवहारमा हुन सकेन : डा. बाँस्कोटा - Health Today Nepal
कुष्ठरोग कागजमा मात्र निवारण भयो, व्यवहारमा हुन सकेन : डा. बाँस्कोटा
February 13th, 2019 अन्तर्वार्ता0comments
कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख हुन्, डा. रवीन्द्र बाँस्कोटा । कन्सल्टेन्ट ड्रमाटोलोजिस्ट डा.बाँस्कोटा विगत डेढ वर्षदेखि शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । नेपालमा करिब एक सय ८० जना ड्रमाटोलोजिस्ट छन् । तीमध्ये कुष्ठरोगमा काम गर्ने औंंलामा गन्न सकिने दुईतीनजना मात्र छन् । तिनै औंलामा गन्न सकिनेमध्ये एक हुन डा.बाँस्कोटा । डा.बाँस्कोटासँग कुष्ठरोगको वर्तमान अवस्था, सरकारी प्रयास र भावी चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी:
नेपालमा कुष्ठरोगको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपालबाट सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरियो । कुल जनसंख्यामध्ये प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा कममा मात्र कुष्ठरोग भए निवारण भएको मानिन्छ । सन् २००९। १० मा ०.७९ थियो । त्यसपछि त्यो संख्या बढ्दै गयो । ०.८५ हँुदै ०.८९ पुग्यो । २०१६।१७ मा ०.९२ पुगेको थियोभने २०१७।१८ मा ०.९४ पुगेको तथ्यांक छ । प्रत्येक वर्ष प्रिभिलेन्स रेट बढ्दो छ । यही अनुपातमा बढ्दै गए अर्को वर्ष प्रति १० हजार जनसंख्यामा एक जनाभन्दा बढीमा कुष्ठरोग देखिने सम्भावना प्रबल छ । हामी फेरि निवारणभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुग्ने अवस्थामा छौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो ठूलो चुनौती हो ।
कुष्ठरोग उन्मूलनतिर अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी फेरि सन् २०१० कै निवारणसमेत नभएको अवस्थामा फर्केंछौं, यस्तो कसरी भयो ?
यसलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु हँुदैन । हामीले यो अवधिमा लुकेर बसेका कुष्ठरोगीलाई खोज्यौं र उपचारमा ल्यायांै । सरकारले कुष्ठरोगबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा खोज पडताल अभियान सञ्चालन गरेका कारण धेरैजसो कुष्ठरोगीलाई फेला पारेर उपचारमा ल्याउन सफल भएका हौंं। यही कारण नयाँ कुष्ठरोगीको संख्या बढी भएको हुनसक्छ ।
सरकारले कुष्ठरोगी खोज्न कति खर्च ग¥यो त ?
सरकारले एक जना कुष्ठरोगी खोज्न प्रतिव्यक्ति करिब ५० हजार रुपैया खर्च गरेको छ । यसलाई खोजपडताल अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको छ । विशेषगरी यो अभियान क्रमशः कुष्ठरोग प्रभावित तराईका जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिएको छ । घरघरमा विज्ञहरूसहितको टोली पठाउनुपर्दा यति खर्च हुने गरेको हो ।
किन फेरि निवारणअघिकै अवस्थामा फर्कने अवस्थामा छौं भने सरकारको कमजोरी भएन र ?
कमजोरी र प्रगति दुवै भयो । कमजोरी यसअर्थमा भयो कि कुष्ठरोग निवारण भइसक्यो भनेर हामी ढुक्क भएर बस्यौं । कागजमा मात्र निवारण भयो, व्यवहारमा हुन सकेन । प्रगति के भयो भने हामीले समाजमा लुकेर बसेका सयौं विरामी खोज्न सफल भयौंं । त्यसैले त हरेक वर्ष नयाँ कुष्ठरोगीको संख्या बढ्दै गयो ।
कसको के कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ ?
नेपालमा मुटु रोगका लागि छुट्टै अस्पताल छ । क्यान्सरका लागि छुट्टै अस्पताल छ । तर छालासम्बन्धी रोगका लागि कुनै छुट्टै सरकारी अस्पताल छैन । २५ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको छालासम्बन्धी रोग छ । कुष्ठरोगसम्बन्धी अस्पताल एनजीओ र आईएनजीओले सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले खोलेको कुनै कुष्ठरोग अस्पताल छैन । त्यसैले सम्पूर्ण छाला रोगसम्बन्धी उपचार हुने, अनुसन्धान गर्न सकिने र अध्ययन गर्न सकिने केन्द्र मुलुकमा आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, निवारण भइसक्यो भनेर कम प्राथमिकता दिइयो । यसमा सरकार र गैरसरकारी संस्था दुवैको कमजोरी छ । निवारण मात्र होइन त्यसलाई उन्मूलन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दथ्यो, तर त्योअनुसार एक्सन भएन कि जस्तो लाग्छ । कुष्ठरोगबाट बढी प्रभावित भएका १८ जिल्लामा मात्र फोकस भएर कार्यक्रम भए । सबै जिल्लामा खोजपडतालको कार्यक्रम हुनुपर्दथ्यो । कम प्राथमिकता हुन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता कम हुँदैगयो । कुष्ठरोग चिन्ने र उपचारसम्म ल्याउने उत्प्रेरणा कम भयो । सरकारको बजेट पनि घट्दै गयो । निवारण भइसक्यो किन बजेट चाहियो र भन्ने मानसिकता भयो । हामीले सरकारलाई बुझाउन सकेनौं, सरकारले बुझेन । यही कारण अवस्थानिवारण हुनुभन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुग्यो ।
अहिले कति जिल्लामा कुष्ठरोगको संक्रमण बढी छ ?
१७ जिल्लामा कुष्ठरोगको संक्रमण बढी छ । त्यसमध्ये पनि वढी जिल्ला तराईका छन् । सबैभन्दा बढी कुष्ठरोगी प्रदेश नम्बर २ मा छन् ।
सरकारले कुष्ठरोगमा कति बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ?
जति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो त्यसअनुसार कुष्ठरोगसम्बन्धी कार्यक्रम परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसको अधिकांश हिस्सा स्थानीय निकायमा पठाइसकेका छौं । २५ प्रतिशत प्रदेशहरूमा पठाएका छौं, जम्मा ५ प्रतिशत मात्र शाखासँग छ ।
केन्द्रको काम के त ?
केन्द्रले त नीति, नियम बनाइदिने र अनुगमन गर्ने मात्र हो । समन्वय गर्ने हो । कार्यान्वयन स्थानीय निकायले गर्ने हो । हामी निर्देशिका बनाउँछौ, व्यवहारमा उतार्ने पालिकाहरूले हो । त्यो अधिकार पालिकाहरूलाई दिइएको छ । अब पालिकाहरूलाई यस काममा जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । अब केन्द्रले गरिदेला भनेर पन्छिन मिल्दैन ।
स्थानीय निकायहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको जस्तो लाग्छ त ?
साँच्चिकै भन्ने हो भने पालिकाहरूले दिइएको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको पाइएन । केन्द्रले जिम्मेवारीसहित बजेट दिएको छ । तर पालिकाहरूले त्यसको गाम्भीर्य बुझ्न सकेका छैनन्जस्तो लाग्छ । उदाहरणका लागि हामीले कुष्ठरोगी खोज पडतालका लागि एक पालिकालाई पाँच लाख रुपैयाँ पठायांै । तर पालिकाका अधिकारीले त्यसलाई हल्काफुल्का ढंगले लिए । गहन रूपले खोजपडताल नै नगरी कुनै पनि कुष्ठरोगी पत्ता नलागेको भन्दै रिपोर्ट दिए र बजेट मात्र सके । त्यहाँ कुष्ठरोगी थिए र छन् । यसरी कामै नगरी बजेट सकियो । काम गरे यसको चुनौती अझै भयावह हुनसक्छ ।
कुष्ठरोग सर्नबाट बचाउन सरकारसँग के कार्यक्रम छ ?
यसको संक्रमण अरुमा फैलिन नपाओस् भनेर हामीले कुष्ठरोगी भएको परिवारका सदस्यहरूलाई रिफामेसन नामक औषधि दिने गरेका छौं । यो कार्यक्रम अहिले आठ जिल्लामा मात्र छ । यसलाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
हरेक वर्ष कुष्ठरोगका कति नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्?
गत वर्ष तीन हजार दुई सय नयाँ बिरामी पत्ता लागका थिए । यो वर्ष त्यो संख्या बढेर ३६ सय पुगेको छ । यो संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । संख्या बढ्नुको अर्थ चुनौती पनि बढ्नु हो । किनकि बिरामी बढ्दा अरूमा सर्ने सम्भावना पनि बढ्छ ।
दातृ निकायको सहयोग कस्तो छ ?
सरकारलाई राम्रो सहयोग र सहकार्य छ । त्यसैले त निवारण सम्भव भएको थियो । फेरि निवारण अगाडिकै अवस्थामा फर्किएका छौ । अब झन् सहयोगको खाँचो छ । उपचार र पुनस्र्थापनामा सहयोग छ ।
कुष्ठरोगसम्बन्धी जनचेतना कस्तो छ ?
पहिलेको तुलनामा सुधारोन्मुख छ । कुष्ठरोगी पनि अहिले समाजमा खेल्न थालेका छन् । तर अहिले पनि कुष्ठरोग सुरु हुन थालेको थाहा पाउँदासमेत उपचारका लागि नआउने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । अंगभंग हुन थालेपछि मात्र उपचारका लागि आउने गर्छन् । यो चलन हटाउनु आवश्यक छ । किनकि सुरुकै अवस्थामा उपचारमा आए अंगभंग हुनबाट बचाउन सकिन्छ । यो रोग गरिबलाई मात्र होइन धनीलाई पनि हुन्छ । फरक यत्ति हो कि धनी कारमा चढेर औषधि उपचार गर्छन् ।
कुष्ठरोगीका लागि सरकारले के के सहुलियत दिएको छ ?
कुष्ठरोगको औषधि देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क उपलब्ध छ । रोग पहिचान र परीक्षण सबै निःशुल्क छ । औषधिको कोर्स पूरा गरिसकेपछि अस्पतालमार्फत एक हजार यातायात खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँछ । रियाक्सन म्यानेजमेन्टका लागि पनि एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसके रिफर गरे यातायात खर्च एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । खोकनामाकुष्ठप्रभावित र उनीहरूको परिवारलाई खाना र दाउराको व्यवस्था गरेको छ ।
भावी योजना के छन् त ?
राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति २०१८ का आधारमा काम गदैछौं । यसमा तीन कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारको स्वामित्व, कुष्ठरोग सर्ने प्रक्रिया र जटिलता रोक्ने र भेदभाव रोक्ने । सबै जिल्लामा खोजपडताल गर्नुपर्छ र उपचारमा ल्याउनुपर्छ । समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ, त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ । विभेदकारी कानुन हटाउनुपर्छ । सामाजिक चेतना विस्तार गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका छाला रोगको उपचार हुने केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ । यो विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । यति गर्न सक्यौं भने कुष्ठरोग निवारण हुन्छ । यति गर्दा पनि भएन भने थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कहाँनेर कमजोरी भयोे, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ ।
डा. रवीन्द्र बाँस्कोटा, कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख हुन्।
Previous article डा. नुतनको प्रयासले महिनावारी सुकेकी ५४ वर्षीया महिलाले जन्माइन जुम्ल्याहा
Next article चैतको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय परिवार योजना सम्मेलन